Twitter မှာ Block ခံရလို့ Donald Trump ကို တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦီး | Buzzy
Copyright © 2021 Buzzy. All rights reserved.
Twitter မှာ Block ခံရလို့ Donald Trump ကို တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦီး
San Wadi Hnin
posted on3years ago
updated on3years ago
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်Twitter Account မှာ သူနဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူသူတွေကို ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်နဲ့ Block ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး Social Media တွေမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ပိုိင်account ကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုBlock မှာပေါ့ဆိုတဲ့လူတွေကတစ်ဖက် သမ္မတဖြစ်နေလို့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ block လို့မရဘူးလေလူကြီးလူကောင်းဆန်ရမယ် ဆိုသူတွေကတစ်ဖက်နဲ့တော်တော်လေးဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားခဲ့သေးတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်တရားရုံးက ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီိးတရားသူကြီိးNaomi Buchwald က Trump ဟာ သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်နေပြီိး Trump ရဲ့ account ဟာ လူအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့account ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်မတူမှုကြောင့်စိတ်လိုက်မာန်ပါblock ခွင့်မရှိ ဆိုတဲ့ ဥပဒေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက Block ခံရသူတွေထဲမှာတစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အာရှ-အမေရိက နွယ်ဖွား ဆရာဝန် Eugene Gu ဆိုသူဟာ သူ့လိုပဲအတူတူ block ခံခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူDonald Trump ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ Eugene က Donald Trump ရဲ့ account မှာ မူဆလင်လူမျိုးတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အတိုက်အခံ comment မန့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီcomment ဟာ like 2k ရပြီိး ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ့နောက်ပိုိင်းသိပ်မကြာခင်မှာပဲTrump က သူ့ကိုိ Block သွားခဲ့တာပါ။ Eugene က Donald Trump ကိုိတရားစွဲဆိုရာမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရပြီးနှစ်ပတ်အကြာမှာတော့ Trump က Eugene ကို unblocked ပြန်လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။Eugene ကတော့ သမ္မတကိုယ်တိုိင်တောင်မှ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကို လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းစိတ်ချယုံကြည်စွာသိရလို့ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း သူ့ရဲ့ account မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
I’m still blocked by Trump despite winningafederal lawsuit against him. Every day I remain blocked means the President is infringing upon my First Amendment rights and violatingafederal order. Follow the rule of law and the Constitution you swore to protect, Mr. President. pic.twitter.com/HOfdFXRMes
— Eugene Gu, MD (@eugenegu) May 24, 2018
I sued Trump and won. Thanks to the hard work of my co-plaintiffs, Katie Fallow and our legal team, and the Knight First Amendment Institute, the President of the United States just unblocked me on Twitter. Not even Trump can infringe upon our First Amendment rights. pic.twitter.com/8Gf7vM59l8
— Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 5, 2018
Buzzy Team မှ စီစဉ်တင်ဆက်သော buzzy.com.mm တွင် ဖော်ပြပါရှိသော သတင်းများ၊ သတင်းဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် facebook စာမျက်နှာ ၊ website များတွင်မဆို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
သမီးရည်းစား နှစ်ယောက် ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ.....အားအင်တွေ ရှိနေခဲ့ရင်
သဘာဝဆန်တဲ့ဟာသကားကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် မြင့်မြတ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ဖိုးရှိတ်” ရုပ်ရှင်ကားကြီး
အသက်ပြည့်သူတွေသာ ကြည့်ရမယ့် ကာတွန်းကား (NSFW)
ကိုယ်အိမ်သာတက်နေတုန်းမှာ ချောင်းကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ
အလန်းစား စုံတွဲပုံလေးတွေကို ဘယ်လိုရိုက်မလည်း (နမူနာ ပုံ ၄၀)
မွေးနေ့ပွဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့်အကြောင်း ကြေငြာလိုက်တဲ့ မိုးယုစံ